जस्लाई अफ्नो मिर्गौला दिइन उसैसंग बिहे गरिन, रविना बादिले तेस्रो विवाह आखिर को संग गरिन त ? ( हेर्नुहोस भिडियो सहित) – " कञ्चनजंगा News "
जस्लाई अफ्नो मिर्गौला दिइन उसैसंग बिहे गरिन, रविना बादिले तेस्रो विवाह आखिर को संग गरिन त ? ( हेर्नुहोस भिडियो सहित)
No Comments on जस्लाई अफ्नो मिर्गौला दिइन उसैसंग बिहे गरिन, रविना बादिले तेस्रो विवाह आखिर को संग गरिन त ? ( हेर्नुहोस भिडियो सहित)
आरुषसंग केही महिना अघि भारत गएकी रविना गुमनाम भएकी थिइन् । तर एकाएक आरुषले आफुलाइै धोका दिएको र त्यसका लागि दुई युवती जिम्मेवार रहेको भन्दै नाम सहित भिडियो सार्वजनिक गरेकी थिइन् । आफु अब बाँच्न नचाहेको भन्दै देह त्याग गर्न लागेको भिढियो समेत बाहिर आएको थियो ।
← प्रचण्ड–एक इन्च जमीन पनि अरूलाई छोडिन्न, मिचेको जमिन फिर्ता गरेरै छोड्छौँ → २० हजारको औषधी उपचार नगरे तँ म*र्दैछस भन्ने मातालाई प्रहरीले गर्यो पक्राउ (हेर्नुहोस भिडियो)